လေယာဉ်အက်ဆီးဒင့်က ၂ကြိမ်တောင်လွတ်တဲ့ ဖိုးကံကောင်း P chogyi ကို ဗျူးချင်တာနဲ့ အတော်ပါပဲ။
စကော နဲ့ တောင် ရွက်ရမယ် ဆိုတော့ ကျောက်စီမ်းတုံးကြီးများလား :bar:
ကထူးဆန်းရယ် ဖတ်ရွေးတွေရဲ့ ဘတ်ဂျတ်အနေအထားကို တွက်လိုက်ရင်….
ကျောက်စိမ်းတုံးဆိုရင် မှန်ဘီလူးနဲ့ ကြည့်ရမယ့်အရွယ်ပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ :harr:
မှန်ဘီလူးနဲ့တောင်မရလောက်ဘူး။ အာကာသကြည့်မှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်မှ ခပ်ရေးရေးမြင်ရမယ်။
ကိုနာဂ ၊ ကိုဘုန်းကျော် ၊ ဖြိုး ၊ တို့လည်း သတိရမိပါရဲ့ ..
ကျွန်တော် အားအား… မအားအား… အရောက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း…
ဒီရက်ပိုင်း အတော်လေးမအားတာနဲ့ ဖျားနေတာနဲ့… အွန်လိုင်းကို ခပ်ပြူးပြူး… ခပ်ပြာပြာ ၀င်လာမိသောကြောင့် ကော်မန့်လေးတောင် သေချာမရေးနိုင်တာခွင့်လွှတ်ကြပါစေကြောင်း…
အဲ့ဒီ ပွဲ ကို ဆူး လာပါမယ်..
ကူညီပေးဖို့ လိုအပ်တာ ရှိရင်လည်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သော် ကူညီရန် အသင့်။
စောစောက ကံစမ်းမဲ ကိစ္စ ကတော့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်။
သူများကားတွေ ဆိုတော့ အရမ်း ၀မ်းနည်းသွားပြီ.. အဟင့်..
ဆူးက အရင်ကတည်းက ၀င်ကူညီနေတာပါ။
မြေပုံကို Google Maps ကနေ ရှာကြည့်တာ ..
ဂလိုလေးတော့ တွေ့ဒါဘဲ ..
ဟုတ် မဟုတ်တော့ မသိ .. အဟီးး
” ကန်တော်ကြီး ကရ၀ိတ်ဥယျာဉ်ထဲက မျှော်စင်ကျွန်းသို့အ၀င်လမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့
P3 ထိုင်းစတိုင် စားသောက်ဆိုင်မှာ ”
ကရ၀ိတ်ဥယျာဉ် ဆိုတာ ဘယ်နားမှာ ရှိတာလဲ ။
မျှော်စင်ကျွန်း ဆိုတာကရော ဘယ်နားမှာ ရှိတာလဲ ။
အဘ အဲဒီ နှစ်ခုစလုံးကို မသိဘူး ။
အဘ က ကန်တော်ကြီး ဆိုတာ တစ်ခုပဲ သိတယ် ။
ကန်တော်ကြီးကို ရောက်ခဲ့ပီဆိုရင် ကရ၀ိတ် ဖောင်တော်/ဌက်..ရှိတဲ့နေရာကို ..
၀င်ပေါက်က ဘယ်သူ့ကို မေးမေး ရလောက်ပါ့မယ်..
သူ့ထဲကို ၀င်ဖို့ အပေါက် ၂ ပေါက်ရှိပါတယ်..
စားသောက်ဆိုင်တွေ နဲ့ နီးတဲ့အပေါက်.ကိုမေးရင်အဆင်ပြေပီး..
P3 စားသောက်ဆိုင်ကလည်း အပေါက်နဲ့ အနီးဆုံး ဆိုင်ပဲ ခင်ဗျ..
ကျနော် ငှားသုံးမိတာ ခုံတော် မောင်ကျဘမ်း ဇဂါးဆိုတာလေးကို
မိတိုက်ဂျီး ပေါဒါ မှန်လောက်ဒယ်ကွ ….
ဥမတ်ဂျီး ကို ဘာလုပ် ညာလုပ် ဆိုလားဘာဘဲ …
ဂယ် သိချင်ရင် ဟိုဘက်က ကွန်မန့်ဒွေဒဲ ပျံကျည့်ဘာ .. ငွင်းး ငွင်းး
အခု .. ဒီဇဂါး အရ ဆိုရင်ဒေါ့ဖြင့် ….
ဥမတ်ဂျီး အဖော်ခေါ်လာရဲ ခေါ်လာကျည့် …
ကျုပ်က ရှင်ဥတ္တမကျော် နေရာက ဝင်သရုပ်ဆောင်ပလိုက်မှာ …
ဘာမှတ်လဲ .. ငွင်းး ငွင်းး
ကျုပ်က မြေပုံတခုခုပေါ်မှာ လမ်းတွေ လမ်းညွှန်တွေထည့်ဆွဲပြီး စကင်ကူး တင်ပေးမလို့ ကြိုးစားနေတာ… ဘယ်မြေပုံမှ စိတ်တိုင်းမကျလို့
အခု ဂူးဂဲပုံမှာထည့်ဆွဲရင် အဆင်ပြေမယ်
မြေပုံတော့ ထည့်ထားလိုက်ပါပြီ ကိုဖေါရေ..
ကျေးဇူးပါ ဦးပါ ၊ အခုတော့ သေချာသိသွားပါပြီ ။
အခုလိုအစီအစဉ်ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးကျမဲ့ သူတွေအားလုံးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ခင်ဗျ…
ဒီပွဲကို ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူစွာ တက်ရောက်ပါမည်ခင်ဗျား
အခုပဲ အဲဒီ ဆုပေးပွဲကို ဇန်နဝါရီထဲမှာ လုပ်မယ်လို့ ကျွန်တော့်ကို တစ်ယောက်က ပြောခဲ့တာ သတိရလို့ ဂေဇက်ထဲ ဝင်မွှေတာ အဆင်သင့် ဒီပိုစ့်ကိုတွေ့ပါတယ်။ တစ်လ တစ်ခါ ဆုရသူများကို ဂုဏ်ပြုချင်စိတ် ရှိပါတယ်။ ဒီထဲက လူတွေနဲ့လည်း တွေ့ဖူးချင်စိတ်ရှိပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ အဲဒီနေ့ (၂၀. ၁. ၂၀၁၃) က ကျွန်တော့် ရှားရှားပါးပါး အားရက်ထဲက တစ်ရက်လည်း ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ လာပါမယ် .. စာရင်းပေးပါတယ်ဗျ။
ကျွန်တော့်ကိုရော တွေ့ချင်ဘူးလားလို့း))
ကို သူရဿဝါ ကို ကျနော်တို့ကလည်း တွေ့ဆုံ ခင်မင်ချင်ပါတယ် ။
လာမယ် ဆိုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင် ဝမ်းသာစွာနှင့် ကြိုဆိုပါတယ် ။
ကျနော်တို့က ရွာသူား အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်တာပါဗျာ ။
တတိယ အချက် ။
အခုမှ သေချာကြည့်မိတယ် ။
ကို သူရဿဝါ နှင့် ကို ရင်နင့်အောင် နှင့် က ၊
Avatar ထဲမှာ ရုပ်ချင်း တော်တော် ဆင်ကြတယ်နော် ။
ညီ အစ်ကို လို့ပြောရင် ယုံလောက်တယ်ဗျ ။
သူရဿဝါလို နာမည်ကြီး ဘလော့ဂါ လာတာ ဆိုရင် ဂဇက်ပွဲ က ပိုပြီး တင့်တယ်သွားမှာပါ။
မှတ်ချက် ဘာပေးရမှန်း မသိလို့ သာ တော်ရုံမပေးဖြစ်တာ။
သူရဿဝါ စာတွေကို အရမ်းသဘောကျပါတယ်။
ရင်နင့်အောင် ရဲ့ စာတွေ ကိုလဲ အားလုံး ကြိုက်ကြပါတယ်။
၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာက ရွာပွဲကို ကျနော်မလာဖြစ်တော့ပါ
19-25 ကျနော်ဘောစိ ခရီးထွက်မည်တဲ့
မင်္ဂလာပါ ဦးဦးရေ … ။
တခါတည်းနဲ့ ရွာသူရွာသား အတော်စုံစုံလင်လင်တွေ့ရမဲ့ပွဲမို့ …. လာဖို့ ကြိုးစားပါဦးမယ်… ဒါပေမယ့် … ကျန်းမာရေးကြောင့် minor operation တစ်ခု ဒီလထဲ လုပ်ဖို့လည်းရှိသေးတာ ၊ ရက်ကွန်ဖမ်းမဖြစ်သေးလို့ပါ ….. ။ ကွန်ဖမ်းဖြစ်တဲ့ရက်နဲ့ အဲ့ဒီနေ့ နဲ့များ တိုက်ဆိုင်နေခဲ့လျှင် ….. လွမ်းစရာတွေ ဖြစ်ကုန်တော့မယ် .. ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ .. ရွှေတိုက်ဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး အကြောင်းကြားပါမယ် ဦးဦးရေ ။
Etone လို လက်ရင်းရွာသက်ရှည်မန်ဘာတွေ လာကိုလာရမှာပေါ့…
အိတုန်နဲ့ဒေါက်တာကို အစကတည်းက စာရင်းမှတ်ထားပြီးသားပါ သမီးရေ…
အဘဖေါက ကန်တော်ကြီးဆိုတာ (ယခင်)ကန်တော်ကြီးပဲလေ့စ်ဟိုတယ်က စပါး ကိုပဲသိတယ်လို့
လေဒီ အုတ်ကိုပါ မမ်ဘာဝင်ခိုင်းပြီးခေါ်လာမယ်နော် ဟီး
ရွာထဲကလူတွေနဲ့ လည်းတွေ့ ရမယ် ၀ါးတီးလည်းစီစဉ်ထားတယ်ဆိုတော့
မနက်ကပဲ သတင်းတစ်ခုရပါတယ် ….
ဦးကျော်ခဲ က လာဖို့ ၈၀% ပါတဲ့ ။ ခွင့် ကိစ္စနဲ့ လေယေဉ်လက်မှတ်စီစဉ်နေပါတယ် …။
လက်မှတ်ဖိုး (၇) သိန်းကျော် အကုန်ခံပြီး ရွာသူားတွေကို ဆုံတွေ့ ချင်လွန်းလို့ လာမှာပါ ။
ဒီတွေ့ ဆုံပွဲ အပေါ်မှာ အလေးအနက်ထားတဲ့ ဦးကျောက် ရဲ့  စိတ်ဓတ်ကို အထူး လေးစားမိပါတယ် …..
ဒီရွာပေါ်မှာ ထားရှိတဲ့ သံယောဇဉ်ကိုလည်း သတိပြုမိပါတယ် ။ ကျနော်တို့ လို ပြည်တွင်းမှာနေသူတွေ
အနေနဲ့လည်း အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် လာရောက်ဆုံတွေ့ ကြရင်း ….. ခင်မင်မှု တစ်ဆင့် တိုးလို့
မိတ်ရင်း ဆွေရင်း တွေအဖြစ် ဆုံတွေ့  ကြပါစို့ ……..
မျက်နှာဖုံးခွါချ …. ပကတိ အပြုံး တွေနဲ့ ပျော်ပျော် ပါးပါး ညီရင်းအစ်ကို ၊ မောင်ရင်းနှမ တွေလို
အားလုံးကို ဆုံတွေ့ ချင်ပါတယ် ……
ကျနော် စာရင်း ပေးပါတယ် ……
(ခရီးယာယီ များနေတာမို့ နောက်ကျနေတာပါ ။ ခုလည်း မကြာမှီ ခရီး ထွက်ရဦးမှာပါ ။အချိန်မှီ …
မှီရာ အချစ် …အဲလေ ..မှားလို့ …မှီရာ ရထားစီးပြီး လာဖြစ်အောင် လာပါ့ မယ် …၊။ )
ထောက်ခံပါတယ် ဗျို့ ဒါပေမယ့် မိရွှေကြည်တယောက်တော့ ဒီပွဲနဲ့လွဲပြီမို့ ၀မ်းနည်းမိတယ်။
အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေ အဲဒိနေ့မှာ အားလုံကို သတိတရနဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ပွဲတက်လိုက်ပါ့မယ်။
မောင်ဝါ၀ါတို့ ရင်နင့်အောင်တို့လို ဘလော့ဂါတွေ လာမယ်ဆိုတော့ ဒို့ပွဲက ခေသူမဟုတ်ပေပဲ။
အောင်မိုးသူ နဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိရင် ဆုလာယူဖို့ ပြောလိုက်ကြပါအုံး။
ဦးကျောက်ခဲ ပုစဉ်းစီးလာရင်တော့ အဘဆွေနေရာ ထည့်ပြီး သရုပ်ဆောင်ခိုင်းလိုက်ရမယ်။
ကိုဆာမိလည်းလာရင်တော့ ခေတ်သစ်ပုဂံပြည်ကဖို့ အရည်းခိုင်ကိုပါ ရအောင်ခေါ်ရမယ်။
ယနေ့သတင်းများအရ ဦးကျော်ခဲ လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်း၏ ဖေ့ဘွက်မှာ ယခုကဲ့သို့ရေးသားထားပါသည်။
၁၈ရက် သောကြာနေ့ည ၁၁:၃၅ မှာ ရောက်၍ ၂၁ရက် တနလာင်္နေ့ နံနက်လင်းအားကြီး ၀၁:၀၀ မှာ ပြန်ပါမည်….
ကိုရွှေတိုက် ကို ဦးကျောက် ပွဲတက်ပါမည့် အကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတင်းပို့ပေးကြပါ….. :D
ဟောင်ကောင်မှ အလိုရှိသည်များ မှာကြားနိုင်ပါသည်……
မှတ်ချက် ဦးကျော်ခဲ အစား ဦးကျောက်ခဲ ဟုပြန်ဆင်ဖတ်ရှုပေးပါရန်…။
မိသားစုနဲ့ဆို.. တယောက်၁၅၀၀ အမြောက် ၃ = ၄၅၀၀ ဘာကြေး..ညာစရိပ်နဲ့.. သိန်း၉၀-၁၀၀လောက်ကုန်မယ်မှန်းတယ်..
လွတ်လပ်သော လူများ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါတာကို သဘောကျရင်
တိုင်းမရှင်း နဲ့ နောက်ပြန်သွားပြီး လူပြိုကြီး ပြန်လုပ် သူကြီးရေ့။
အခုမှ တိတ်တိတ်လေး နောင်တ ရမနေနဲ့။
အာဂကတော့ သူရဿဝါကို ကောင်းကောင်းကြီးမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်နော်
မိုချိုက ဆုယူဖို့ ကိုယ်စား သူ့အမေနဲ့ အဖော်တစ်ဦးလာမယ်လို့ စာရင်းပေးပါတယ်။
ဆရာအုပ်လာမယ်ဆိုရင် ပွဲမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံတွေကို မီးနင်းပွဲနဲ့ တူအောင်ရိုက်နော်။
ပွိုင့် ခြောက်သောင်းကျော်ရထားတဲ့ Cobra လာမယ်ဆိုတော့ ဦးFatty တို့ Intro တို့ သတိရတယ်၊ဘယ်ပျောက်နေကြပါလိမ့်၊
ကိုပေါက်လို ဗျိုးဟစ်လိုက်မယ်။ ရွာကိုပြန်လာကြပါဗျိုး။ု
ကျွန်တော်မျိုးကြီး မောင်အာဂလည်း လာရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ နည်းနည်းလေးပွဲစည်သွားအောင်လို့…။ ကော့တေး။ ပန့်၊ဘီယာများ စီစဉ်ပေးလျင်အတိုင်းထက်အလွန်ကျေးဇူးတင်မည်ဖြစ်ကြောင်း အရက်သမား သမဂ္ဂ ကိုယ်စား အကြံပြု ဆွေးနွေးတင်ပြအပ်သည်။
လွန်တာရှိ ၀န်တာမိပါ ဆြာ ဆ ဆရာများ ခဗျာ။
ဘော်ဒါကြီးတို့ကတော့ လုပ်ပီ … တစ်ခါသေဖူး ပျဉ်ဖိုးနားမလည်သေးဘူးနဲ့တူတယ် ….
ဒီက ဘော်ဒါက အဲဒါတွေ လုပ်လို့မရသေးဘူးလေ …. စိတ်လျော့ထားရတာ … သွားရည်ကျအောင်မလုပ်နဲ့ …
Count Down .. 8 Days to go …
Call now for your seat ..
ဟိ ဟိ ..
ရွာသူရွာသားများ ဆုံစည်းပွဲနေ့ကျရင် မောင်ကျောက် နေမရထိုင်မရ ဖြစ်နေမယ့်အရေးတော့ ပြေလည်သွားပါပြီ။
တဝေးတလံ ကနေ မနှေးအမြန် လာရတာမို့ မောင်ကျောက်ကို ၂မိနစ်လောက်တော့ လျှာရှည်ခွင့်ပြုပါ ခင်ဗျား…
ဦးကျောက်ခဲရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကလေးကို လိုက်လျောပေးလိုက်ပါအုံးလို့ သူခမျာ အတော်ကို ကြိုးစားလိုက် တာကို ဖေ့ဘုတ်မှ ဖတ်ရလို့ပါ။ လိုက်လျောပေးပါ နော် နော်လို့။
၂ မိနစ် မဟုတ်ဘူး ၊ ၂ နာရီ ဆက်တိုက် ပေးပြောမယ် ။
အဘတို့ ဒီမှာ ၁ မိနစ်ကို ဘာပြောရမလဲ မသိဖြစ်နေတာနှင့် ၊ အတော်ပဲ ။
ထောက်ခံပါတယ် FR ရေ။
အဝေးကြီးက လိင်ဗျံစီးပြီးလာရတဲ့ ဦးကျောက်ခဲကို ကျမအတွက် ၁မိနစ်လည်း ပေးပါတယ်။ :harr:
ရှာပေ ဟောကြောပွဲရေး.တစ်ထု..ဖစ်တွားတာပေါ့..နော် ။
ဆုပေးဖို့ အော်ဇီကလာမယ့် အဘဖေါ၊ဆုယူဖို့ ဟောင်ကောင်ကလာမယ့် ဦးကျောက်ခဲ တို့ရဲ့ ဂဇက်သံယောဇဉ်ကြိုးက တော်တော်ခိုင်ပါလားနော်။
ဂဇက်မိသားစုဝင်တွေ အားလုံးကို ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။
အလုပ်ကို ဘယ်လိုအကြောင်းပြပြီးသွားရမလဲဆိုတာ အကြံလေးပေးကြပါအုံး
ကိုပေါက်လာရင်.. နောက်နှစ် ကွန်ဖရင့်ကို.. မန်းလေးမှာလုပ်ဖို့တိုင်ပင်ကြပေါ့..။
..နောက် နောက်တနှစ်ကတော့.. လော့ကျတဲ့ကျလိကျလိမှာလုပ်မယ်..လို့..။
ကိုခိုင် ကျနော်မလာဖြစ်တော့ဘူး သေချာသွားပြီ
ကျနော်ဆရာက 19-25 သူခရီးထွက်မယ်ကြေညာသွားပြီ
ဟုတ်တယ် ၊ နောက် တစ်လှည့်ကို မန္တလေးမှာ လုပ်သင့်တယ် ။
ဘယ်လိုလဲ ၊ မန္တလေး သူားတွေ အဆင်ပြေ မလား ။
နောက်နှစ်ကွန်ဖရင့်ကို မန္တလေးမှာလုပ်ရင် မန်းသူားတွေကတော့အဆင်ပြေတယ်
(ဧည့်ဝတ်ကျေတတ်လွန်းလို့ ဖြူခါပြာခါကျ ကျန်ခဲ့မှာတခုပဲ :harr: )
ရန်ကုန်က သွားကြမယ့်သူတွေသာ စဉ်းစားရမှာ…။
ခဲတပစ် သာသာလောက်တောင် သွားမလားမသွားမလားလုပ်နေတာ
အနည်းဆုံး အသွားအပြန် နှစ်ညအိပ် စားရိတ်လေးသောင်းလောက် ကုန်မယ့်ခရီးဆိုတော့…
၁၈ ရက်(သောကြာ) ညကားနဲ့ ရန်ကုန်ဆင်း၊ စနေနေ့ လည်ပတ်၊ တနင်္ဂနွေ မနက် တွေ့ဆုံပွဲတတ်ပြီး ညနေကားနဲ့ ပြန်ပါမည်။
နေပြည်တော်-ရန်ကုန် (Elite express) ၆၀၀၀ x ၂ = ၁၂၀၀၀ ကျပ်
စနေနေ့ စားစရိတ်သုံးနှပ်စာ = ၆၀၀၀ ကျပ်
တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်စာ+နေ့လည်စာ အတွက် တွေ့ဆုံပွဲမှာ အဝတီးလိုက်၊ ဒါဆို ညစာ = ၂၀၀၀ ကျပ် ပဲကုန်တော့မယ်.. :harr:
ဗဟန်းသုံးလမ်းက ရုံးမှာတည်းပြီး တက္ကစီနဲ့ ပွဲကို အသွားအပြန် = ၃၀၀၀ ကျပ်ခန့်
မမျှော်လင့်သော အသုံးစရိတ်က အင်း.. ၅၀၀၀၀ ကျပ်လောက်
စုစုပေါင်း ၇၃၀၀၀ ကျပ်.. ရှင်မွေးလွန်းထံ အသုံးစရိတ် တင်ထားပါသည် ဟီ ဟိ
ဒါလေးများ. ရန်ကုန်မှာ ဖိနပ်မေ့ကျန်ခဲ့လို့ လို့ပြောပြီးပြန်လာ
ကျွန်တော်လဲ ရွာသူရွာသားတွေ နဲ့ တွေဆုံဖူးချင်လို့လာချင်ပါတယ်….။
ကိုကိုဖော်ဂိုင်း သွားမယ်ဆိုရင် ကို မာဃနဲ့ချိတ်ပေးလိုက်ပါမယ်
အဲဒီစားသောက်ဆိုင်မှာ စီစီတီဗွီ နေရာအနှံ့တပ်ခိုင်းထားသည်။…နောက်မှပြန်ကြည့်မည်။
ဦးစံလှကြီး ကော ဘာစီး တက်မလဲ ခင်ဗျ..
မှော်ဆရာ ၊တပ်မ၇၇ တို့ လည်း အသံကြားချင်မိပါရဲ့..
20 ရက်နေ့ကို ဘာအကြောင်းရှိရှိဖျက်ပြီး ဆုပေးပွဲကို လာခဲ့ပါမယ်။ ရွာထဲကလူတွေလည်း တော်တော်ဆုံမှာဆိုတော့ ပျော်စရာကြီးပဲနေမှာ။
ဒါပေမယ့် အားတော့ မလျှော့နဲ့အုံး။
ကံအားလျှော်စွာ အခြေအနေ ပြောင်းလဲသွားရင် ၁၉ ရက်နေ့ကျမှ ကြုံရာကားနဲ့လိုက်လို့ရသေးတယ်။
ဘောစိကို 21 ရက်နောက်ပိုင်းမှ ခရီးထွက်ဖြစ်အောင် မန်းမှုတ်ပေးကြမယ်လေ။
ကန်တော်ကြီးထဲက မျှော်စင်ကျွန်းဘက်ကို လာဖူးတဲ့ သူလဲရှိမယ်.. မလာဖူးတဲ့သူလဲရှိမယ် ထင်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် ဒီနေ့ မျှာ်စင်ကျွန်းထဲဝင်ပြီး P3 စားသောက်ဆိုင်ကို ၀င်ရိုက် ပစ်လိုက်တယ်..မှားစရာ အကြောင်းမရှိပေမယ့် မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် မျက်စိထဲမှ မြင်ယောင်နေအောင် တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်.. ဒီ post မှာကြည့်ပါ..https://myanmargazette.net/163470/travel
မိုးပြာတပည့်လေးလည်း လာမယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း
မိန်းမ နှင့် ကလေး 1နှစ်သား ခေါ်လာပါမည့် အကြောင်း
တကယ့် မိုးပြာလားဟင် ။
Uniform ကတော့ မပြာ(သေး)ပါဘူး၊
စိတ်ထဲမှာတော့ အပြာရင့် ရင့်
မိမိနှစ်သက်တဲ့ မိမိယုံကြည်ရာမှာ နေထိုင်ပြောဆိုခွင့်ရှိပါတယ်။
အခုကျနော်တို့တွေ့ဆုံမယ့် ပွဲလေးက စာရေးသားခြင်း စာဖတ်ခြင်း မှာဝါသနာပါသူအချင်းချင်း ဆုံတွေကြရအောင်
ဖတ်ရွေးအဖွဲ့(ကိုယ်ဝါသနာအရကိုယ်လုပ်သူများ)က နှစ်သက်လို့ရွေးထားတဲ့ အနှစ်သက်ဆုံးစာမူပိုင်ရှင်တွေကို
ကျနော်တို့ရဲ့ ချွေးနည်းစာ ငွေတွေထဲက တတ်နိုင်သလောက်အသုံးပြုပြီး ဂုဏ်ပြုပွဲလေးလဲဖြစ်ပါတယ်။
အပျော်တွေစွန်းနေ အပျော်တွေစုနေစေဘို့ ကြည်နူးခြင်းတွေမျှဝေကြဘို့ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တဲ့ပွဲလေး
စာပေချစ်သူတွေ သန့်သန့်လေး ဆုံဆည်းတဲ့ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဲတော့ kthwinzayarmyo လဲံ ရွာထဲက စာပေချစ်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ တက်ရောက်နိုင်သလို
နောက်နှစ် မန်းလေးမှာ လုပ်မလား
အတွေး တစ်ခု ပေါ်မိတယ်
ရွာသူားတွေကို ဗီဒီယိုနဲ့ ဟိုနည်းနည်း ဒီနည်းနည်း ပြောမပေးချင်ဘူးလား
ဒါရိုက် မပြောချင်ရင်လဲ ဗီဒီယိုဖိုင်ပို့ပြီးတော့လေ
သူကြီးကို အချွန်နဲ့ မ နေတာလား။ ကြည့်ရဲလို့လား.. တော်ကြာ ဟိုက ရွာပွဲမလာရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ အကယ်ဒမီကား ၁၀ ကားစာလောက် ငိုပြလိုက်လို့ ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေမယ်နော်.
သူကြီးဆိုတော့လည်း ကျော်လို့မရ.. ရပ်လို့မဖြစ်နဲ့.. (အခွေကိုပြောတာနော်)…
မန်ဘာတွေ အများကြီး လာမှာဆိုတော့
ဒါပေမယ့် နေရာက အမေရိကန်မှာ ဆိုတော့
တက်ရောက်ဖို့ မလွယ်တဲ့အတွက် ပုံတွေ တက်လာမှပဲ
ကြည့်ရင်း ကြည့်နူးပါတော့မယ် ။
သူကြီးမင်းရဲ့စကားတွေကိုလည်းနားထောင်ချင်တာပေါ့။
မနက်ပိုင်း အခမ်းနားမစခင်ရောက်အောင် လာပါမယ်။